Unoda Kuva ISeO Specialist? Semalt Inopa Mhinduro
Unofarira kuwana nzvimbo yako yakarongeka zvakanaka mu kutsvaga injini migumisiro? Kana zviri izvo, saka iwe unofanira kudzidza ins uye kubuda kwekutsvaga injini nekuedza kuve nyanzvi yeSeO. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kudzidza nzira dzakasiyana siyana uye nzira dzinogona kuvandudza mapeji ewebsite yako. Kuisa mari muunyanzvi hwako hwe SEO kuchakuwana mhinduro dzaunoda mukati memazuva mashoma. Zvose zvaunofanira kuita ndezvedzidzo dzakasiyana siyana uye nzira.
Ross Barber, Mutengi weKuteresi Achibudirira ( Semalt , anotsanangura pano kuti ave muongorori anodiwa SEO.
Enda kune SEO
Chokutanga pane zvose, unofanira kudzidza zvidzidzo zveSeO, uye izvi zvinongobvira chete kana iwe uchiverenga pamusoro payo pane mamwe mawebsite nemabhuku. Semuenzaniso, shanyira blog ye Yoast yepamutemo kuti uve nemafungiro ekuti SEO ndeye uye kuti sei kutarisa nzvimbo yako mukati mitsva yekutsvaga injini. Iwe unogona zvakare kuedza Moz uye Search Engine Land kuti uende kune SEO nenzira iri nani. Izvi zvinofanirwa kuti mawebsite ave kutanga uye ave nyanzvi ye SEO sezvavanotipa nemashoko akawanda uye ruzivo pamusoro pekutsvaga injini yekugadzirisa..Tevera dzimwe SEOs pa Twitter ne Instagram uye nyatsocherechedza zvavanogovana pamapuratifomu avo. Iwe unofanirwawo kubatanidza maBrazil pamusoro pekutsvaga injini nekutsvaga zvinyorwa zvedzimwe nyanzvi dzinogovera mukati memunharaunda.
Ongorora zvirongwa zvekudzidzisa
Mapurogiramu akasiyana-siyana ekurovedza anowanikawo paIndaneti nezvekutsvaga injini. Iwe unogona kudzidza SEO kuburikidza nemitambo yakabhadharwa kana isina kubhadharwa. Iwe unogona zvakare kuona SEO blogs uye mawebsite apo mazveri vanogovana mazano akasiyana uye tricks kuziva zvakawanda maererano neSeO yakakosha uye yakanyanyisa. Yoast inopawo dzimwe nheyo dze SEO uye nguva dzose nyora zvinyorwa zvevashanyi vakasiyana. Kune avo vanofarira kudzidza SEO, zvidzidzo zvakasiyana zvinowanika paIndaneti. Semuenzaniso, Moz uye Search Engine Land inopa vashandisi vadzo nezvinhu zvakawanda zveSeO-zvine chokuita. Iwe unogona kudzidza zvinyorwa zve SEO, kuti unyore zvakanakisisa sei zvewebhu uye unatsiridza kutaridzika kwese kwewebsite yako, kuti ungabata sei unyanzvi hwekutsvaga kwekutsvaga injini uye kuti ungashandisa sei zvakagadzirirwa data kumapeji ako ewebhu.
Mhando mbiri dzeSOO nyanzvi
Kune marudzi maviri ematsvaji ekutsvaga kugadzirisa, uye iwe unofanirwa kuva nemafungiro avo: vakukuri vanoziva nzira dzose dzekutengesa uye vatengesi vanoshandisa mazano ekushandisa mawebsite. SEO kudzidza inoshandiswa nyore kana iwe uchiziva musiyano pakati pemhando mbiri idzi. Vamwe vane basa rekutumira nekunyora zvinyorwa zvinyorwa, vamwe vanotarisa pamushambadziro wezvemagariro evanhu, asi vamwe vanobhadhara zvikuru mukusika backlinks nekukamba nzvimbo yako.
Kuti uve sangano rose-rakapoteredza SEO nyanzvi, iwe uchafanira kudzidza zvose pamusoro peiyi nyanzvi dze SEO uye kuti vanoita sei mabasa avo nenzira iri nani. Kunyanya, iwe unofanirwa kunge uine ruzivo neunyanzvi hwekugadzira uye husati huri hwehutano hwebasa racho. Zvakachengeteka kutaura kuti kuva SEO kunotora nguva, saka haufaniri kunetseka pamusoro pechinhu chero chipi zvacho. Ingoramba uchidzidza uye wedzera ruzivo rwako kuti uwane kubudirira munyika ye internet Source .